Xaflada Xuska Dib u curashada XDSHSI - Cakaara News
Xaflada Xuska Dib u curashada XDSHSI
Jigjiga ( Cakaaranews ) Axad, 20ka march 2016. Waxaa caawa hoolka shirarka ee qaryaan dhoodaan kadhacay xaflad lagu maamuusayay dib u curashada XDSHSI ee 8dii sano ee u danbaysay oo ahayd xiligii uu xisbigu kutalaabsaday nabadgelyadan, horumarkan iyo maamulkan suuban ee maanta deegaanku kunaaloonayo.
Hadaba xafladan lagu xusayay dib u curashada XDSHSI oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay waliba wehelisay casho-sharaf ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenada, golaha wasiirada, gadhwadeenada xafiisyada kaladuwan ee heer deegaan, kooxaha fanka iyo suugaanta deegaanka iyo marti sharaf kale.
Xafladan ayaa waxaa ugu horayn furay kooxaha fanka ee deegaanka oo masraxa kaqaaday heeso katurjumaya waxqabadkii XDSHSI ee 8dii sano ee u danbaysay.
Waxaana furitaankii xaflada kahadlay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kawar bixiyey sooyaalkii taariikheed ee uu deegaanku soo maray isagoo gaar ahaan xusay dhibaatadii iyo hagar-daamooyinkii shacabka soo haystay oo ay sababayeen ururadii nabadiidka, fikiradii cidhiidhyanaa iyo is qab-qabsigii xukuumadihii talada soo hayay xiliyadaas. Kuwaasoo laf dhuun gashay kunoqday horumarka. Nolosha Shacabka deegaankana khal-khal, daganaansho la’aan iyo jahawareer kuriday. Balse, wixii kadanbeeyay 2000TI oo maanta laga joogo 8sano inay tahay in hoosta laga xariiqo waxqabadyada laxaadka leh ee dhanka nabadgelyada, horumarka iyo maamulka suuban ee ay xukuumada dalka, tadeegaanka, XDSHSI, ciidanka difaaca qaranka, ciidanka gaarka ah ee DDSI iyo shacabka deegaanka oo iskaashanaya ay dhaliyeen. Taas oo kuqotonta danaynta iyo kadamqashada baahida shacabka. Waxaana tusaale u ah waxqabadyada horumarinta nolosha aas aasiga ah ee bulshada oo ay xukuumada maanta ka arimisa deegaanku kusalaysay qorshayaasheeda waxqabad. khaasatan kajawaabida baahida adeegyada aas aasiga ah oo ay ugu horeeyaan biyaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale oo ay ugu horeeyaan wadooyinku.
Dhanka kalana, madaxwaynaha ayaa tilmaamay higsiga sidii looga bixi lahaa saboolnimada loogana mid noqon lahaa wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay. Taas oo ay xukuumadu udiyaarisay qorshayaashii lagu fulin lahaa oo ay kamid tahay in shaqo abuur loo sameeyo bulshada iyadoo iskaashatooyin la isugu xidhayo islamarkaana daymo lasiinayo, biyo-xidheenada waa wayn ee laga hirgalinayo toga faafan oo qayb laxaad leh kaqaadan doona dhanka kor uqaadida waxsoosaarka beeraha IWM.